Kubiza R250 000 ukuthola isihlalo etafuleni elizobe linoRamaphosa | News24
Kubiza R250 000 ukuthola isihlalo etafuleni elizobe linoRamaphosa
East London - Kumenywe izicukuthwane ezisuka ezindaweni nasemazweni ahlukahlukene emcimbini we-ANC wokugubha iminyaka engu-106.
Lo mcimbi ozokuba ngoMgqibelo uzobe uhanjelwe nguMengameli waseKenya u-Uhuru Kenyatta kanye nalowo owayenguMengameli waseMozambique uJoaquim Chissano, uMengameli wezwe uJacob Zuma kanye nalowo owayenguMengameli uKgalema Motlanthe.
Okhulumela ihhovisi likaMengameli waseKenya uMenoah Esipisu, ukuqinisekisile lokhu ngokuthi: “Kuqinisekiswa izolo ukuthi uMengameli wethu uzohambela umcimbi we-ANC ozokuba se-East London ngale mpelasonto.”
UKenyatta ukulele ngohambo lomsebenzi kanti njengoba ezokuba nomhlangano noMengameli uZuma eThekwini, ngaphambi kokuba bajoyine abanye abaholi e-East London.
OLUNYE UDABA:Akukhulunywanga ngekusasa likaZuma emhlanganweni we-NEC
Iphephandaba iSowetan lithole ukuthi uMengameli uZuma uzotheleka e-East London ngoLwesihlani ukuba yingxenye yesidlo sasebusuku esenzelwe ukuthola uxhaso lwezimali.
Kulesi sidlo, uMengameli kaKhongolose uCyril Ramaphosa uyena ozokuba yisikhulumi esiqavile.
Kuthiwa isihlalo esibiza kancane kunazo zonke etafuleni elizobe lihleli uRamaphosa sizokuba ngu- R250 000.
Umcimbi omkhulu uzokuba ngoMgqibelo lapho kulindeleke amalungu e-ANC angu-120 000 ukuba agcwalise izinkundla ezintathu iBuffalo City, Buffalo Park neJan Smuts.